TWR INDIA BQ20 - Nepali Landing Page
TWR बाइबल क्विज़ (Bible Quiz) कॆ हो?
अधिक जानकारी को निम्त्ति यहाॅ क्लिक गर्नुहोला।
TWR बाइबल क्विज़ भारतीय भाषाहरुमा बाइबल को गहन अध्ययनलाइ प्रोत्साहित गर्ने अनि रूचि बडाऊने माध्यम हो। हामी गत 11 वर्ष देखि बाइबल क्विज़ को सफल आयोजन गर्दै आएका छौ ‌। मुख्यतः यो सफलता डाॅ. जे. विर्नोन मैग्गी द्वारा तैयार गरिएको क्रमानुसार बाइबल अध्ययन श्रंखला TTB मा आधारित छ, जसको अनुवाद 100 भन्दा अधिक भारतीय भाषाहरुमा इण्डिया सित उपलब्ध छ। TWR बाइबल क्विज़मा सम्मिलित हुने प्रत्येक कलीसियाले गवाही दिये कि यति गहिरो अनि सठिक अध्ययन गर्नु उनिहरुको निम्ति एउटा अदि्तीय अनुभव रहेको छ। सन् 2019 मा संपूर्ण भारत देश बाट 66,000 भन्दा अधिक प्रतियोगिहरुले भाग लिएका थिये।
यस वर्ष हामी प्रयत्नशील छौ कि यो कार्यक्रमलाई एक कदम अघाडि लैजांदै भारत बाहिरका देशहरूमा पनि आयोजित गरौ। यसै कारण अनलाईन बाइबल क्विज़ आयोजित गरने निर्णय लिएका छौ । वर्तमान मा कोविड-19 को महामारी ले गर्दा यसलाई अधिक बल प्रदान गरिएको छ ताकि हामी सरकार द्वारा प्रदान नियम-कानूनको सिमा भित्र रहंदै आफनो उद्देश्य पूरा गर्दै सेवालाई अघि बढ़ाउन सकौ।
हामी आशा गर्छौ कि यो वर्ष पनि तपाईहरू वार्षिक कार्यक्रममा सम्मिलित भएर एउटा अदभुत अनुभव प्राप्त गर्नु हुनेछ, हामीहरूसंग प्रस्थानको पुस्तक को यात्रा द्वारा आत्मिक पोषण प्राप्त गर्नु हुनेछ। तपाईहरूको सहयोगले हामीलाई अझ धेरै सुसमाचार सुनाउनु अनि सम्पूर्ण देशमा विश्वासिहरूलाई दृढ़ बनाउनुमा प्रोत्साहित गर्दछ अनि यस प्रकारले TWR इण्डिया को यस सेवकाई मा निरंतर तपाईको सहयोग प्राप्त हुन्छ ।
TWR इण्डिया बाइबल क्विज़ भारतको 14 भाषाहरूमा आनलाईन उपलब्ध छ जो भारतको भाषाहरूको विभीत्तताको माझ एउटा विशाल समुहलाई सम्मिलित गर्दछ। यस वर्षको भाषाहरूको सूची जान्नलाई यहाॅ क्लिक गर्नुहोस।
यदि तपाईले यी भाषाहरू मध्धे कुनै भाषा पढ्न अनि बुझ्न सक्नु हुन्छ भने तपाई सरलता संग यस बाइबल क्विज़ को हिस्सा बन्न सक्नु हुनेछ। पंजीकरण को समय ध्यान राख्नुहोस कि तपाई तय्स भाषाको चयन गर्नुहोस जुन तपाईलाई सजिलो लाग्छ।
क्विजको तारिक :
बाइबल क्विज़ दिनांक 28 अनि 29 नवम्बर 2020 मा हुने तय गरिएको छ। सम्पूर्ण विश्वभरका समय अनि टाइमजोनको अझ जानकारी यो गाइडलाइन्सको लिंकमा क्लिक गर्दा चाँडै पाइनेछ, तब, जब तपाईको सफलता पुर्वक पंजीकरण हुनेछ।
पंजीकरण शुल्क भारतीय रूपिया एक पल्टमा देय 50 रूपिया मात्र।
पंजीकरण शुल्क बाइबल क्विज़ का पंजीकरण गर्ने समय आनलाईन नै जमा गर्नु पर्नेछ।
यदि तपाईले भारत बाहिरको देशबाट पंजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ भने पंजीकरण शुल्क भारतीय रूपियामा नै देय हुनेछ । यदि तपाईलाई पंजीकरण शुल्क जमा गर्नुमा कुनै प्रकारको समस्या भए तपाईले वेब साईट मा दिएको कुनै पनि फोन/मोबाईल नम्बरमा संपर्क गर्नुहोस् ।
जब तपाईको पंजीकरण सही प्रकारले पूरा हुन्छ तब तपाईलाई TWR इण्डिया द्वारा प्रमाणीकरण संदेश को साथमा नियमावली अनि बाइबल क्विज़ को तैयारी को लागि आडियो संदेश पठाइने छ ।
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र दर्ता सुरू गर्नुहोस्